FITOHANANA LAVARENY : Efa misy ny fandrindrana tanterahin’ny Kaominina Antananarivo – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:59
Accueil/Fanadihadiana Manokana/FITOHANANA LAVARENY : Efa misy ny fandrindrana tanterahin’ny Kaominina Antananarivo
FITOHANANA LAVARENY : Efa misy ny fandrindrana tanterahin’ny Kaominina Antananarivo
Antomotra ny fankalazana ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny 2020. Sahirana tanteraka ireo olona mikasa ny ho any Analakely sy Antananinarenina iny. Maharitra ora maromaro vao tonga any amin’ireo toerana ireo ny mponina Antananarivo sy ny manodidina. Na izany aza, efa narindran’ny Kaominina Antananarivo ny lalan’ireo zotra miditra eny Analakely sy ny manodidina, nanomboka ny farany herinandro teo, mandra-pahatonga ny faran’ny taona….
Rado Harivelo 23 décembre 2020
Efa somebiseby tanteraka ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina hiatrika ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona. Roa andro sisa dia higadona ny fetin’ny Krismasy, raha afaka hafitoana kosa, dia hivalona tanteraka ity taona 2020 ity. Misedra olana tanteraka anefa ireo olona mikasa ny handeha ho any Antaninarenina sy Analakely na ireo mikasa hiantsena eny Behoririka. Rehefa fotoana tahaka izao tokoa, matetika samy mitondra ny fiarany avokoa ireo olona andeha hiantsena na hiditra eny Analakely sy iny Antaninarenina iny. Nambaran’i Hery mipetraka eny Sabotsy Namehana fa tsy latsaky ny ora efatra vao tonga any Anosy ny tenany. “Indroa miampita taksibe aho fa tonga any hamonjy ny toeram-piasako. Soa ihany fa miasa tena, fa raha izany aloha no miasa birao, dia sasatry ny miditra tara any am-piasana. Isan’ny tena mahatara ahy ny fitohanana eo Analamahitsy. Raha miakatra ho aty Andravoahangy na mivadika iny Ambodivona iny, dia vao mainka tafahitsoka tanteraka, noho ny fisian’ny fanamboaran-dalana eo Ambodivona”, hoy izy nanazava. Nasongadiny fa raha iny amin’ny faritra Andravoahangy iny, dia ny fibahanan’ireo mpivarotra amoron-dalana, izay tsy manaja intsony ny lalan’ny fiara sy ny mpandeha fa manao izay danin’ny kibony amin’ny arabe natao ho fivarotana.
Nasiana fandaminana ny lalan’ny taksibe
Ho an’ireo taksibe avy any Atsinanan’Antananarivo, toy ny zotra 135 Fifiama sy ny zotra 144 Mitsinjo, tsy miditra any Analakely izy ireo fa rehefa tonga eo Behoririka, dia mihodina amin’ny farihy, mandray ny lalana Juliette Ranarivelo ary mizotra mankany Andravoahangy avy hatrany. Ho an’ny zotra 109 Sitraka sy ny 135,ny 141 Fifiama, ny 154 Miorina, ny 183 CAT, ny zotra 109 Sitraka, ny 186 Mitsimbina avy any Analakely, dia mihazo avy hatrany amin’ny lalana mankany Tsiazotafo, midina manaraka ny Nosy Be Hotel ary manaraka ny lalana mahazatra azy ireo ihany. Ho an’ny zotra 105 Kofimava, sy ny zotra 112 ary ny zotra 114 Soamira, miampy ireo zotra avy any Ambohimanarina, dia noferana tsy hiditra intsony mankao Analakely fa avy hatrany dia mihodina eo amin’ny lalana Rainitavy, mandalo manoloana ny Royal Spirit, mandalo ny Magro ary mihazo avy hatrany ny lalana Ampanjaka Toera eo Antanimena ary miverina amin’ny lalana alehany ihany.
Ho an’ireo zotra 123 Ambinintsoa sy ny A avy any Ambalavao Isotry rehetra kosa, mihodina eo amin’ny Cotona Tsaralalana ary mihazo ny lalana Ramamonjisoa, amin’ny faritra Petite Vitesse iny, ary mitodi-doha mankany Ampefiloha indray avy eo. Ireo zotra 105 Kofimava avy any Anosy kosa indray, dia mandray avy hatrany ny lalana Ramisaray Behoririka, mihodina ny farihy ary manohy ny lalana efa mahazatra.
Be mpitsidika ny jiro eo Antaninarenina
Isan’ireo iharan’ny fahatapahan-dalana maromaro ny eny amin’ny faritra Antaninarenina iny, araka ny fanapahana avy amin’ny Fiadidiana ny tanànan’Antananarivo. Ho tapaka mihitsy ny fifamoivoizan’ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny lalana maromaro eny Antaninarenina manomboka amin’ny 7 ora alina ka hatramin’ny 9 ora alina. Isan’ny tena iharan’izany ny eo amin’ny BMOI Antaninarenina, ny BFV Antaninarenina, ny Lapan’Ambohitsorohitra, ny Hotel Louvre, ny manoloan’ny Tahirim-bolam-panjakana iny. Anton’izany, noho ny hamaroan’ny olona hianoka ny hakanton’ireo jiro miavaka napetraka eny Antaninarenina iny. Tsy vao izao moa no nisy an’izany fa efa nanomboka ny taona 2019 iny. Na izany aza anefa, ireo fiara izay mikasa ny handeha ho eny, dia misy ny fandaminana manokana. Mihazo avy hatrany ny Hotel Colbert, midina ny Pavet ary mivoaka any Ambohidahy avokoa ireo fiara avy any Ambohijatovo sy Antaninarenina rehetra. Heverina, araka izany, fa hampihena ny fitohanan’ny fifamoivoizana ny fanarahana ireo lamina napetraka mba hahafahan’ny rehetra mianoka tanteraka ny fetin’ny Asaramanitra.
ANDRIMPANJAKANA: Fantaro ny momba ny Antenimierandoholona
ADY AMIN’NY FAHANTRANA : « Isan’ny vahaolana ny fandraisana andraikitry ny vehivavy », hoy i Mialy Rajoelina